के महिनावारीको समयमा पेट दुख्नु खतरनाक छ ? जान्नुहोस् यी यस्ता ५ प्रश्नहरूको उत्तर - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
२०७८ भाद्र, १६ बुधवार
महिलाहरूलाई महिनावारीको समयमा पेट दुख्ने समस्या हुन्छ । कसैलाई धेरै दुख्छ भने कसैलाई कम । महिनावारीको समयमा धेरै पेट दुखेर महिलाहरू बेहोस समेत हुने गर्दछन् । महिनावारीको समयमा धेरै महिलाहरूलाई नियमित काममा जान समेत समस्या हुने गरेको पाइन्छ ।
केहि मानिसहरु महिवारीको समयमा पेट दुख्न राम्रो लक्षण होइन भन्नेमा विश्वास गर्छन् जब कि यो कुरा सत्य होइन । हामी यहाँ महिवारीसँग सम्बन्धित धारणाको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।
महिनावारीको समयमा अमिलो र चिसो चीज खानु हुँदैन ?
महिवारीको समयमा अमिलो कुराहरू खानु हुँदैन भन्नुको पछाडी कुनै पनि वैज्ञानिक कारण छैन। सिट्रस खानामा भिटामिन सी प्रशस्त पाइन्छ, जसले प्रतिरक्षा बढाउन भूमिका खेल्दछ । चिसो चीजहरु पनि निश्चित मात्रामा खानुपर्दछ । किनभने महिवारीको समयमा ग्यास्ट्रिक जस्ता समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
महिनावारी हुँदा गर्भवती हुन सक्दैन ?
यो महिनावारीको समयमा गर्भवती हुन असम्भव छैन। जब तपाइँको महिनावारी नियमित हुन्छ भने गर्भावस्थाको तपाइँको सम्भावना धेरै हुन्छ।
गर्भावस्था विशेष गरी महिनावारीको दोस्रो वा तेस्रो दिनमा हुन सक्छ। त्यस्तै, यदि तपाइँलाई महिनावारीको समयमा अधिक रक्तस्राव हुन्छ भने गर्भधारणको सम्भावना उच्च हुन्छ ।
के मैले महिनावारीको समयमा व्यायाम गर्नु हुँदैन ?
यो मानिन्छ कि महिनावारीको समयमा व्यायामले दुखाई बढाउन सक्छ । तर यो कुरा पनि सत्य हो कि केही किसिमका व्यायामले दुखाईमा राहत पनि दिलाउँछ । तपाइँ सजिलो अभ्यास वा योगआसन आफ्नो आराम अनुसार छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
चिसो पानीले नुहाउँदा दुखाइ बढ्न सक्छ ?
महिनावारीको समयमा पेट दुख्नु चिसो पानीमा नुहाउने कुराबीच कुनै सम्बन्ध छैन । तर यदि तपाइँ तातो पानीले नुहाउनुहुन्छ भने तपाइँको पेट र तल्लो भागहरूमा तातो हुन्छ, जसले तपाइँलाई राहत दिन्छ।
महिनावारीको बेला सेक्स गर्नु हुँदैन ?
महिनावारीको समयमा सेक्स गर्ने वा नगर्ने पूर्णतया तपाइँमा निर्भर गर्दछ। कहिलेकाहीँ जब महिनावारीको समयमा तीव्र पीडा हुन्छ त्यस्तो समयमा यौन सम्बन्ध एक ठूलो राहत हो। स्वास्थ्य को मामलामा, महिनावारीको समयमा यौन सम्बन्ध राख्नुमा कुनै समस्या छैन।